Moa ve ny orinasa sarobidy amidy SEO firma?
Ny fametrahana ny SEO firma dia fanontaniana mahalalahana raha ny fanapahan-kevitra farany sy ny fisafidianana ny ekipan'ny mpikaroka matihanina amin'ny fitarihana ny dingana rehetra fanavaozana ho anao. Toa, ny tompon'ilay tranonkala rehetra dia maniry ny hanao ny aterineto ho laharam-pahamehana. Izany no antony mahatonga ny vahaolana maro momba ny SEO azo alaina amin'ny fidirana mivantana amin'ny Internet - ray ban masculino preo. Amin'ny lafiny iray anefa, ny orinasanao dia mendrika ny hampiasa SEO firma mba hahita ny fanatsaranao nataon'ireo manam-pahaizana fotsiny. Fa nahoana? Raha ny amiko, heveriko fa tsy tokony hikirakira ny SEO firma ianao mba hahazoana ny fandrosoana tsara indrindra, ka tsy ho vitanao amin'ny drafitra hetsika DIY, na dia mety hitranga aza izy ireo. Andeha hojerentsika ny hevitro.
Fa maninona no manampy ny SEO firma?
Raha ny tena izy, ny tontolo maoderin'ny fanatsarana ny milina fikarohana dia mihamitombo tsy tapaka ary miovaova hatrany eo ambanin'ny fanavaozam-baovao miverimberina amin'ny algorithm of Google. Midika izany fa ny zavatra fantatrao momba ny SEO, ohatra, roa na telo volana lasa, dia mety tsy mety miasa, na mety hanimba mihitsy aza ny fikarohana ataonao ankapobeny. Satria misy mihoatra ny 200, ny fanapahan-kevitra lehibe indrindra dia miankina amin'ny. Izany no mahatonga ny fironana vaovao rehetra, ary ny fomba fanao SEO tsirairay dia lasa tsy azo tanterahana, indrindra ho an'ny tompona orinasa madinika. Satria asa tena sarotra ny mitazona ny masonao eo amin'ny fampivoarana ny fikatsahana ny fikarohana, ary mandany fotoana be loatra mba hanana fahatakarana lalindalina kokoa momba ilay foto-kevitra.
Etsy ankilany anefa, ny fanampiana avy amin'ny SEO firma manam-pahaizana, dia manaiky foana ny fomba amam-panao farany momba ny SEO izay tena mifanaraka amin'ny tranga manokana aminao, dia zavatra tsy azo tanterahana ho an'ny mpandraharaha tokana. Tsy lazaina, fa ny orinasanao manokana dia manana mpiasa an-tsoratra maimaim-poana be dia be mihitsy no tokony handoavana ny sainao manokana. Noho izany, nahoana moa ianao no tsy tokony hanao ny fanatsarana ny fikarohanao amin'ny seo SEO manam-pahaizana?
Inona no azo atao amin'ny fampiasana ny SEO firma?
Voalohany indrindra, ny ekipa matihanina SEO matihanina rehetra dia tokony nandany farafaharatsiny nandritra ny taona vitsy lasa izay noho ny tranga maro isan-karazany mitovy amin'ny anao amin'izao fotoana izao. Izany no antony nahatonga azy ireo ho efa nahazatra ny tetika nampiasaina na dia ny tranonkala manokana indrindra aza. Raha manao izany izy ireo, dia manintona amin'ny tetikady ara-barotra dizitaly isan-karazany izy ireo, ohatra, mamorona tranonkala tranokala azo tsidihana sy tranokala mora ampiasaina, miaraka amin'ny zavatra ara-teknika hafa ankamamian'ny fitaovam-pikarohana amin'ny fanomezana loka ambony kokoa.
Ankoatr'izay, mahatratra ny laharana ambony ao amin'ny SERP (manatsara kokoa ny fahitana amin'ny aterineto) dia midika fa mitombo ny vola miditra amin'ny vola miditra sy maharitra. Nahoana no sarotra be izany raha tsy ampian'ny tarika mpinamana? Satria ny ekipan'ny manam-pahaizana dia afaka manampy anao amin'ny fomba fitantanana maimaim-poana indrindra ho an'ny tsirairay, na dia ny antsipiriany indrindra aza mba hanomezana anao fotsiny ny fahombiazan'ny fitadiavana fikarohana. Etsy ankilany, na izany aza, mbola afaka mivoaka ianao ary manandrana anao amin'ny DIY SEO sasany. Nefa mbola azoko antoka fa hiatrika toe-javatra mety ilaina ianao hanampy ny ekipa manam-pahaizana. Na ho ela na ho haingana.